လုပ်ငန်းခွင်မှာ အချိန်ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းကောင်း (၈) ခု
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အလုပ်တွေကို အချိန်ဘယ်လောက်ယူပြီး လုပ်နေသလဲဆိုတဲ့နေရာမှာ အတွက်အချက်ကောင်းလှပြီလို့ ထင်နေပါသလား? ဥပမာ – နေ့စဉ်အလုပ်တာဝန်တွေအပြင် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ အီးမေးလ်တွေ အတွက် အသုံးပြုတဲ့အချိန်တွေ အပါအဝင်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေသာ ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့အချိန်ကို အတိအကျခန့်မှန်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမြန်ဆုံးရာထူးတိုးရန်အတွက် လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက် (၁၀) ချက်
အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့ ဒီနေ့ခေတ် စီးပွားရေးလောကမှာ ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတက်လမ်းကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးစီမံနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ရာထူးမှန်သမျှကတော့ ထိုင်နေရုံနဲ့ အလိုလိုမိုးပေါ်က ကျမလာပါဘူး။ ကိုယ်ကစပြီး လမ်းဖောက်ကြိုးစားရမှာပါ။ ပြီးရင်တော့ တရားနည်းလမ်းကျကျ ပြေပြေပြစ်ပြစ်နဲ့ ရာထူးကိုတောင်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရာထူးတက်ဖို့မတောင်းဆိုခင် ကိုယ့်လုပ်ရည်ကိုင်ရည်မှာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေပြီလားလို့ သေချာစီစစ်ကြည့်ရပါမယ်။
🔶 ၁. အလုပ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။
ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ပုံဟာ နောက်ရာထူးအတွက် အဓိကသော့ချက်ပါ။ လုပ်သမျှ အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်တွေနဲ့ သာမန်ထက် ပိုတဲ့ ကိုယ့်စွမ်းရည်ဟာ အများကြီးအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခြားဌာနတွေကို ကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ် ကူညီတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် တာဝန်လေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပိုယူလိုက်တာဟာ အဖွဲ့အစည်းထဲက ကိုယ့်တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ရာရောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို အလုပ်တွေထပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာဟာ ကုမ္ပဏီကိုအောင်မြင်စေချင်တဲ့ ကိုယ့်စေတနာကို ဖော်ပြရာ ရောက်ပါတယ်။ အလုပ်မှာ ကိုယ့်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကို မီးမောင်းထိုးပြရာလည်း ရောက်ပါတယ်။
🔶 ၂. အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အလုပ်လုပ်တတ်သူ ဖြစ်ပါစေ။
ဒီနေ့ခေတ် အလုပ်တော်တော်များများဟာ အသင်းလိုက် ဌာနလိုက် အပြင် တခြားဌာနတွေနဲ့ ပါ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှ အောင်မြင်တတ်တာပါ။ ဒါကြောင့် အောင်မြင်တဲ့အခါ တစ်သင်းလုံးမျှဝေဂုဏ်ယူတတ်ဖို့နဲ့ ကျရှုံးတဲ့အခါ သူများကို လက်ညှိုးမထိုးတတ်ဖို့ ပိုအရေးကြီးလာပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းကို တန်ဖိုးထားသူဖြစ်မှသာလျှင် သင့်နာမည် သင့်တန်ဖိုးဟာ အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ပိုမိုမွှေးပျံ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပရောဂျက်အသစ်တွေကို ဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းရဘဲ ကိုယ့်သဘောအတိုင်း စိတ်ပါလက်ပါကူညီပါ။ အချိန်ရတိုင်း ကိုယ့်အထက်လူကြီးနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ကူညီပါ။ ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ကို အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်ကိုင်တတ်သူ၊ လူတိုင်းက အလုပ်တွဲလုပ်ချင်တဲ့သူ တစ်ယောက် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
🔶 ၃. မိတ်ဆွေကောင်းကောင်းဖွဲ့တတ်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
ကုမ္ပဏီစားပွဲတွေ၊ တွေ့ဆုံပွဲတွေကို တက်ရောက်ပါ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ရင်းနှီးလေလေ ရာထူးတက်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါ သိသာလေလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီမှာ ကိုယ့်နာမည်၊ ကိုယ့်အားသာချက်၊ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာတွေ၊ ကိုယ့်တန်ဖိုးတွေကို သိတဲ့လူများလေလေ အခွင့်ကြုံလာတိုင်း ကိုယ့်အကြောင်းကို ထည့်ဆွေးနွေးလာကြလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီကုမ္ပဏီမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ရာထူးမတိုးခဲ့ရင်တောင် အသိမိတ်ဆွေ အဆက်အသွယ် ပေါများခြင်းဟာ တခြားကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်သစ်ရစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်မှာပါ။ အထက်လူကြီးတွေဟာ သူတို့ကောင်းကောင်းသိတဲ့ဝန်ထမ်းကို အကြောင်းမသိတဲ့သူထက် ပိုပြီး ရာထူးတိုးပေးချင်တတ်ကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင် ယုံကြည်ချစ်ခင်လာအောင် သူ့ရဲ့ဝါသနာ၊ လုပ်ငန်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလေ့လာပါ။ ဒါတွေကိုသုံးပြီး အလုပ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပွဲမျိုးတွေမှာ အထက်လူကြီးနဲ့ စကားစမြည်ပြောကြည့်နိုင်ပါတယ်။
🔶 ၄. ဗဟုသုတအသစ်တွေ၊ လက်တေ့ွကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေကို လေ့လာသင်ယူပါ။
ရာထူးတိုးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ပညာရပ်နဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ကိုယ့်ဆီမှာ အဆက်မပြတ် တိုးပွားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အလုပ်သာမက လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း လေ့လာနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးတွင်းမှာကော ရုံးပြင်ပမှာပါ ကိုယ့်စွမ်းရည်တွေ တိုးတက်မယ့် အခွင့်အရေးတွေအပေါ် ကိုယ်ဘယ်လောက် မြှုပ်နှံထားလဲဆိုတာ အထက်လူကြီးတွေ သိအောင်ပြသင့်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မာစတာဘွဲ့ကြီးတွေ ရနေမှ ကြိုးစားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် ဆွေးနွေးပွဲတွေတက်တာမျိုးဟာ စဉ်ဆက်မပြတ် သင်ယူခြင်း တစ်ခုပါပဲ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ဟာ အလုပ်အပေါ် အလေးအနက်ထားပြီး သူတစ်ပါးအခွင့်အရေးပေးတာကို ထိုင်စောင့်နေမယ့် လူမျိုးမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်။
🔶 ၅. ဌာနပြင်ပကိုလည်း မျှော်ကြည့်တတ်ပါစေ။
တကယ်လို့ ကိုယ့်လက်ရှိဌာနထဲမှာ တက်စရာလမ်းမမြင်တော့ဘူးဆိုရင် ကုမ္ပဏီထဲက တခြားနေရာတွေမှာလည်း အခွင့်အရေးရှိမရှိ ရှာကြည့်သင့်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကြီးတော်တော်များများကတော့ သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ လစ်လပ်အလုပ်နေရာတွေကို တင်ထားတတ်ပါတယ်။ တချို့နေရာတွေဆိုရင် အပြင်ထက်အရင် ကုမ္ပဏီတွင်းဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးပြီး လျှောက်ခွင့်ပေးတာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်ခေါ်စာတွေကို မှန်မှန်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်နောက်ခံအရည်အချင်း အတွေ့အကြုံနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်မျိုးကို လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်။
🔶 ၆. သင်ပြပေးနိုင်မယ့်သူ ရှာတတ်ပါစေ။
မကြာသေးခင်ကလေ့လာချက်တစ်ခုအရ ရာထူးတိုးသူ ငါးဦးထဲမှာ လေးဦးဟာဆိုရင် ကုမ္ပဏီတွင်း အထက်လူကြီးတစ်ဦးက ဆရာအဖြစ် သင်ပြပေးတဲ့ဆက်ဆံရေးအပြင် အဲ့ဒီအထက်လူကြီးက ကိုယ့်ကောင်းသတင်းတွေကို မျှဝေပေးခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အထက်က လူတွေဆီမှာ တပည့်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဆရာသမားဆိုတာ လုပ်ငန်းအတွက် နည်းပေးလမ်းပြဖြစ်တဲ့ အပြင် သတင်းအချက်အလက်တွေ ရဖို့လည်း အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
🔶 ၇. ရလဒ်များကို မှတ်တမ်းစာရင်းပြုပါ။
အတိတ်က ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို အတိအကျတင်ပြနိုင်လေလေ ရာထူးတိုးဖို့အခွင့်အရေးရလာလေလေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေထဲမှာ ကုမ္ပဏီ နဲ့ ဌာနအတွက် အကျိုးပြုတာမှန်သမျှကို စာရင်းပြုစုထားပါ။ ကိုယ့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲမှာ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုပေါ်လွင်စေတာမျိုး၊ ဆန်းသစ်တဲ့ အကြံဉာဏ်မျိုး၊ အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ကိုယ်ဘယ်လောက်သစ္စာရှိကြောင်း၊ ဘယ်လိုမျိုး ဘဝကို မြုပ်နှံထားကြောင်းတွေကို အထက်လူကြီးမှတ်မိအောင် လုပ်ဆောင်ပြသပါ။ ဒီလို အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းထားခြင်းဟာ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း လှပစေရုံသာမက ရေရှည်အသက်မွေးမှုလမ်းကြောင်းအတွက်လည်း များစွာအထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
🔶 ၈. ပြဿနာတွေကို ခေါင်းခံဖြေရှင်းသူ ဖြစ်ပါစေ။
ဘယ်လိုမှ မရတော့တဲ့အဆုံးကျမှ ပြဿနာတွေကို လုပ်ငန်းရှင်ဆီပို့ပါ။ အဲ့ဒီအခါ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ဖြေရှင်းကြည့်ခဲ့တာကို လုပ်ငန်းရှင်က အသိအမှတ်ပြုပါလိမ့်မယ်။ အခက်အခဲတခုခုကြုံလာတဲ့အခါ အထက်လူကြီးဆီမသွားခင် အနည်းဆုံး ဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုလောက်တော့ ရအောင်ရှာသွားပါ။ ပြဿနာရှင်းတဲ့သူတွေဟာ ရာထူးတိုးတတ်ပါတယ်။ တချိန်လုံး အထက်လူကြီးဆီ ပြဿနာပို့နေသူတွေဟာ ရာထူးမတိုးပါ။
🔶 ၉. စိတ်ပါတဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါစေ။
တက်တက်ကြွကြွရှိတယ်ဆိုတာ အစည်းအဝေးတွေမှာ ပြောသမျှနားထောင်ပြီး ပြသမျှလိုက်ရေးနေတာလောက်ပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေကလည်း အရေးကြီးပေမယ့် အဓိကကတော့ အဖွဲ့ထဲမှာ လှုပ်ရှားပါဝင်နေဖို့ပါပဲ။ မတက်မဖြစ်မဟုတ်ပေမယ့်လည်း နေ့လည်ခင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကို တက်တာမျိုး၊ အဖွဲ့ရဲ့ အလုပ်တွေအောင်မြင်ဖို့အကြံဉာဏ်သစ်တွေ ဝိုင်းစဉ်းစားပေးတာမျိုး ပြုလုပ်ပြီး ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကုမ္ပဏီနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအောင်မြင်ဖို့ ကိုယ်ဘယ်လောက်စိတ်နှစ်ထားလဲဆိုတာ မြင်သာစေပါတယ်။
🔶 ၁၀. စွန့်စားဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့။
အလုပ်မှာ ကိုယ်ဟာ လိုချင်စိတ်ပြင်းပြကြောင်း၊အားကိုးရကြောင်း၊ ပြတ်သားကြောင်း ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ကြောင်း ပြပြီးပါပြီလား။ ဒီလိုခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းတွေဟာ ရာထူးတက်ဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာတွေပါ။ ရုံးတွင်း မူဝါဒအရှုပ်အထွေးတွေ၊ နောက်ကျတာတွေ၊ အချိန်မီအလုပ်မပြီးတာတွေ စတဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကို ရှောင်ပါ။ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ကိုယ့်အောက်ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အမြဲစံပြဖြစ်နေရမှာပါ။ ဒီအရည်အချင်းတွေ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ရာထူးတိုးဖို့ ခဲယဉ်းနေဦးမှာပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာတွေဟာ ရာထူးတက်ဖို့မတောင်းဆိုမီ ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိထားသင့်တဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်တွေကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်တွေထဲကမှ ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကို တွက်ဆပြီး ရာထူးတိုးဖို့ အခွင့်အရေးတွေကို ရရှိနိုင်ပါစေနော်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော ဘယ်အချက်အလက်တွေကို လက်တွေ့မှာ လုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာ Comment မှာ ရေးပြီး မျှဝေပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။
�နောက်နေ့တွေမှာလည်း တခြား အကျိုးရှိတဲ့ ဗဟုသုတရစရာတွေကို တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ Presentation တစ်ခု ဘယ်လိုတင်ဆက်မလဲ
ကျွန်မတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကြာခဏ ကြားရတဲ့ စကားလေး အချို့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အလုပ်ခွင် ဝင်ကာစနဲ့ ကျောင်းတက်နေတဲ့ လူငယ်တွေ ကြားမှာပါ။ ဘာလဲဆိုတော့ “Presentation မပြောတတ်ဘူး၊ မပြောရဲဘူး၊ စာပဲ ကောက်ဖတ်လိုက်ချင်တာ” ဆိုတာလေးပါပဲ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အခြေခံစရိုက်ချင်း မတူကြတဲ့ အတွက် အချို့ က လူရှေ့ ထွက် စကားပြောရတာ ဝါသနာပါတယ်၊ အချို့က ဝါသနာတော့ မပါလှပေမယ့် အဆင်ပြေအောင် ပြောနိုင်ကြတယ်၊ အချို့ကတော့ လုံးဝမပြောရဲပါဘူး။ မပြောရဲတဲ့နေရာမှာလည်း အကြောင်းအရင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ဘာသာစကား အားနည်းမှုကြောင့်၊ ယုံကြည်မှု မရှိတာကြောင့်၊ မှားမှာ စိုးရိမ်တာကြောင့် စသည်ဖြင့် အကြောင်းအရင်းများစွာ ရှိပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်မှာ မိမိ သိကျွမ်းတတ်မြောက်ရာကို ပြောဆိုပြသရတဲ့ Presentation ပြုလုပ်ခြင်းကလည်း နယ်ပယ်တိုင်းမှာ တွင်ကျယ်လာပါပြီ။ အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကြောင့် အများ အားဖြင့် လူတွေက Presentation ဆိုတာကို မလုပ်ရဲကြတာပါ။ ဒါကြောင့် Presentation ဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေ တက်လာစေဖို့ အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေး အချို့ကို လိုက်နာနိုင်စေဖို့ ရေးသား လိုက်ရပါတယ်။
👉ပထမဆုံး အချက်ကတော့ မိမိ စကားပြောထားတဲ့ အသံကို အသံဖမ်းပြီး ပြန်နားထောင်ကြည့်ဖို့ပါပဲ။
အစပိုင်းတော့ တော်တော်ရယ်ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတွေရဲ့အသံဟာ သဘောတရား အရ ကိုယ်ကြားတဲ့ ကိုယ့်အသံနဲ့ သူများကြားတဲ့ ကိုယ့်အသံနဲ့ သိပ်မတူတတ်ပါဘူး။ အသံဖမ်းထားရင် လည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကိုယ်က အဆင်ပြေတယ် လို့ထင်တဲ့ ကိုယ့်အသံနဲ့ အသံနေအသံထားဟာ သူများက ကြားတဲ့အခါမှာ ဖြစ်စေ၊ အသံဖမ်းပြီး ပြန်နားထောင်တဲ့ အခါမှာ ဖြစ်စေအနည်းငယ် မတူတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်အသံကိုယ် ပြန်အသံဖမ်းပြီး နားထောင် ကာ လိုအပ်တဲ့ လေယူလေသိမ်းနဲ့ အသံအဖြတ် အတောက်တွေကို လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် Presentation လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာပါ။ ဒီနည်းလမ်းဟာ နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်တွေ၊ speaker တွေ ကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အစမှာတော့ ခက်ခဲပေမယ့် ဒါဟာ မိမိရဲ့အားနည်းချက်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ မြင်ပြီး ပြင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
👉အသံနေ အသံထား လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ အမူအရာပိုင်းဆိုင်ရာကို လေ့ကျင့်ရပါမယ်။
Presentation လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကြောက်တတ်တဲ့ တချို့သူတွေက စကားပြောရင်း လေသံတစ်တန်းတည်း ဖြစ်နေတာ၊ နားထောင်နေတဲ့ ပရိသတ်ဘက် မလှည့်ပဲ စာတွေပဲရွတ်သွားတာ၊ ကိုယ်နေဟန်ထားကို တောင့်တောင့်ကြီးနဲ့ ပြောဆိုနေတာကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။ ဒါကတော့ ကိုယ်ပြောတာကို နားထောင်နေတဲ့ သူတွေ အမြင်မှာ တော်တော်တော့ တမျိုးတမည် ဖြစ်စေတဲ့ အမူအကျင့်တစ်ခုပါ။ ကျွန်မတို့ဟာ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် မဟုတ်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြောပုံဆိုပေါက်တွေဟာ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်လို စင်းလုံးချော ဖြစ်နေဖို့တော့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ပြောမယ့် စကားနဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို နားထောင်မယ့်သူတွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အမူအရာကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ကြည့်နေကြလိမ့်မယ် ဆိုတာလည်း သိထားဖို့လိုပါတယ်။
သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတွေ အရဆိုရင် လူတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပြောဆို ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းက အမူအရာ၊ ကိုယ်နေဟန်ထား နဲ့ မျက်နှာပေး (body language လို့ပြောနိုင်ပါတယ်) ကနေပြောလိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို လက်ခံ နာယူကြတာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ ၇ ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ အသံကနေ ခံစားသိရှိ တုံ့ပြန်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် body language အဆင်ပြေကောင်းမွန်နေဖို့ အတွက် ပထမဆုံးလုပ်သင့်တာက ကျွန်မတို့ စကားပြောတာကို မှန်ကြည့်ပြီး လေ့ကျင့်ပါ။ မှန်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ်ဖြစ်နေချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း ပြုံးတာ၊ တည်တာ၊ လက်အမူအရာ၊ ကိုယ်အမူအရာတွေ လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။ နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲက စကားပြောကောင်း သူတွေရဲ့ပြောဆိုပုံတွေကို နည်းယူပြီး ကိုယ့်ပုံစံတစ်ခုကို ကြိုးစားတည်ဆောက်ကြည့်ပါ။
Presentation တစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုရင် လူတွေ ကြောက်တတ်တဲ့အရာ နောက်တစ်ခုကတော့ မေးခွန်းတွေ မဖြေနိုင်မှာ စိုးရိမ်တာပါပဲ။ ဒါကလည်း လူ့သဘာဝပါ။ Presentation ပြောတဲ့သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ မိမိ ပြောဆိုရမယ့် အကြောင်းအရာပေါ်မှာ ပိုင်နိုင်စွာ လေ့လာထားဖို့ကတော့ အထူးပြောစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့မထင်မှတ်တဲ့ ရှုထောင့် ကနေလည်း မေးခွန်းတွေ ထွက်လာနိုင်တာကိုတော့ သတိရှိဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေမှာ အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုကတော့ မကြောက်ဖို့ပါပဲ။ မသိတဲ့ မေးခွန်းတွေ အမေးခံရတဲ့ အခါမှာလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ပြုံးထားပါ။
ကျွန်မတို့ကို မေးခွန်းမေးတဲ့သူက သူတကယ်မသိလို့ မေးတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို တမင်တကာ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေချင်လို့ မေးတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ ပြုံးပြီးတော့ပဲ ဖြေပါ။ တကယ် မသိတဲ့ အဖြေတွေ အတွက် မသိကြောင်း ဝန်ခံဖို့လည်း ဝန်မလေးပါနဲ့။ မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မတို့ဘက်က ပြန်ရှာပြီး အဖြေတစ်ခုပေးနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အဓိကကတော့ ကျွန်မတို့ဘက်က ဟန်ချက် မပျက်ဖို့ပါပဲ။ တစ်ဖက်မှာလည်း မိမိပြောရမယ့် Presentation အပိုင်းကို သေချာနားလည်နေပါစေ။
ယနေ့ခေတ်မှာက အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း အစစအရာရာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့အချိန်ပါ။ သိသင့် သိထိုက်တဲ့ အရာတွေကို အချိန်နှင့်အမျှ လေ့လာနေတဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဘာသာစကား စွမ်းရည်ရဲ့ ထိရောက်မှုဟာလည်း အတော်လေး အရေးပါလှပါတယ်။ အရည်အချင်း ရှိတာချင်းအတူတူ ဘာသာစကား (အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာ) ကျွမ်းကျင်မှုဟာ အတော်လေး ကွာခြားမှုှု ရှိစေပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာပဲ နေလာတဲ့ မြန်မာလူမျိုး တစ်ယောက်လို အင်္ဂလိပ်စာကို လေယူလေသိမ်းက အစ လုံးဝကြီး ချောမွေ့နေဖို့လည်း သိပ်တော့ မလိုအပ် လှပါဘူး (ဖြစ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့)။ကျွန်မတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းဟာ သဒ္ဒါမှန်ကန်စွာနဲ့ ကောင်းမွန်စွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်နေရင်ပဲ တော်တော်လုံလောက်နေပါပြီ။
👉နောက်ဆုံးနည်းလမ်းလေးကတော့ ကျွန်မတို့ presentation ပြောနေတုန်းမှာ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်း (သို့မဟုတ်) အသိတစ်ယောက်ယောက်ကို မကြာခဏ စိုက်ကြည့်ကြည့်ဖို့ပါပဲ။
ဒါကတော့ အရမ်းကြောက်တတ်တဲ့သူတွေ အတွက် အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ နည်းလေးတစ်ခုပါ။ ကျွန်မတို့ဟာ လူကြားထဲ စကားပြောရမှာ ကြောက်တယ်၊ ယုံကြည်မှု အလွန်နည်းနေရင်တော့ ကျွန်မတို့ကို ယုံကြည်တဲ့၊ ကျွန်မတို့ အစွမ်းအစကို သိတဲ့သူတစ်ဦးဦးကို မကြာခဏကြည့်နေရင် အလိုလို ယုံကြည်မှုတွေ တက်လာ တတ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်လူကလည်း သူများကို ယုံကြည်မှု၊ အားပေးမှု ပေးတတ်တဲ့ သူဆိုရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။
ဒါကတော့ Presentation တစ်ခု ချောမွေ့စွာ ပြောဆိုနိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့နည်းလမ်း ကောင်းလေး တွေပါ။ နောက်နေ့တွေမှာလည်း တခြား ဗဟုသုတ ရစရာ အကြောင်းအရာတွေကို ရေးသားဖော်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို သက်သာစေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကောင်း (၁၀) ခု
လိုချင်တပ်မက်စရာတွေသိပ်များပြီး၊ အပြိုင်အဆိုင်ပြင်းထန်လှတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်အချိန်မှာ Stress ဆိုတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုဟာ လူတိုင်းအတွက် ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို သက်သာစေနိုင်မယ့်၊ သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာစမ်းသပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ နည်းလမ်း (၁၀) ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ပါ။
တိရိစ္ဆာန်ရုံထဲမှာ ငေးငိုင်ပြီး၊ စိတ်ဆင်းရဲနေပုံပေါက်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေကို တွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ တောထဲက တိရိစ္ဆာန်တွေကို ကြည့်ရင်တော့ မြူးတူးခုန်ပေါက်နေတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အလားတူဘဲ လူတွေဟာလည်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းလာတာနဲ့အမျှ စိတ်ရောကိုယ်ပါ လေးလံထိုင်းမှိုင်းလာပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဖြစ်လာဖို့ ပိုလွယ်ကူလာစေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေဆိုတာက အမြင်၊ အကြားအာရုံတွေက တဆင့် ဦးနှောက်နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို သက်ရောက်မှုဖြစ်လာတာတွေမို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဘယ်လောက်အလုပ်ရှုပ်ပါစေ ချွေးထွက်စေမယ့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေကို တစ်ပတ်ကို ၃-ကြိမ် (တစ်ကြိမ်လျှင် အနည်းဆုံး မိနစ် ၃၀ ခန့်) လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
၂။ ကော်ဖီသောက်သုံးမှုကို လျော့ချပါ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူအများစု (အထူးသဖြင့် ရုံးဝန်ထမ်းများ) ဟာ နေ့စဉ် ကော်ဖီ ၂-ခွက်လောက် သောက်သုံးကြပြီး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကော်ဖီစွဲနေပြီလို့ ယူဆလိုက်ကြပါတယ်။ ကော်ဖီကို ဘာကြောင့်သောက်သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရေအတွက် ပမာဏများလာတာနဲ့အမျှ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်မှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးတာ၊ စိတ်မတည်ငြိမ်မှုဖြစ်စေတာတွေကို ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်ပင်ပန်းလာချိန်တွေမှာ ကော်ဖီသောက်သုံးတာကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
၃။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာ အနားယူပါ (သို့) တရားထိုင်ပါ။
ကောင်းမွန်စွာ အနားယူခြင်းဟာလည်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလိုပဲ မမေ့မလျော့ လုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်တွေနဲ့ ကင်းဝေးရာမှာ Deep relaxation ဆိုတဲ့ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ဖြေလျော့ပြီး အနားယူလိုက်ခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို အမြန်ဆုံးသက်သာစေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးဝေးကို သွားရောက်အနားယူဖို့ ခက်ခဲသူတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာ ခဏအနားယူတာ (သို့) တရားထိုင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
၄။ အချိန်မှန် အိပ်စက်ပါ။
လူတစ်ယောက်အတွက် ပျှမ်းမျှအိပ်စက်ချိန် ၈ နာရီလောက် လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုကြပေမယ့်၊ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နေထိုင်မှုပုံစံ၊ အလုပ်အကိုင်တွေ မတူညီတာကြောင့် အိပ်ချိန် အနည်းအများ ကွာခြားမှုရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိပ်ချိန်နည်းလွန်းတာ၊ အချိန်မှန်မအိပ်တာတွေများလာလို့ Body Rhythm မမှန်တော့ရင် အလုပ်ပြီးမြောက်မှုတွေကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရုံသာမက စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ အိပ်ရာဝင်ချိန်ကို နာရီဝက်ခန့်စောအိပ်လိုက်ပြီး၊ ပုံမှန်အိပ်ရာထချိန်အတိုင်း ထလိုက်ဖို့ပါပဲ။နေ့လည်နေ့ခင်းမှာ ၁၅-မိနစ်ခန့် ခဏမှေးစက်လိုက်တာမျိုးလည်း ကိုယ့်အလုပ်ချိန်နဲ့ ကိုက်ညီရင် အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၅။ တဆက်တည်း မရပ်မနား အလုပ်လုပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်ပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်က တသတ်မတ်တည်းရှိနေတာ မဟုတ်လို့၊ အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်း လျော့နည်းလာပြီလို့ ခံစားလာရချိန်မှာ ခဏအနားယူသင့်ပါတယ်။ သာမာန်အားဖြင့်တော့ တစ်နေ့တာအလုပ်ချိန်အတွင်းမှာ ၂-နာရီခန့်အလုပ်ချိန်ပြီးတိုင်း မိနစ် ၂၀-ခန့်အနားယူသင့်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
၆။ ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်တဲ့ ရလဒ်တွေကို လွန်ကဲစွာ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။
ဒီအချက်ဟာ ရည်မှန်းချက်တွေ မသတ်မှတ်ပါနဲ့လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့ကိစ္စရပ်တွေရဲ့ ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုဟာ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေရဲ့ သက်ရောက်မှု (ဥပမာ – နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှု) တွေကြောင့် ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်တွေ့မကျတဲ့ (သို့) ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေချမှတ်မိတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာတာလားဆိုတာကို သတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်။
၇။ ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံတွေကို ပြောင်းလဲကြည့်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအရာတွေ၊ အကောင်းအဆိုးရလဒ်တွေ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတဲ့သူတွေအပေါ် အကောင်းမြင်တတ်ရုံသာမကဘဲ မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဥပမာ၊ ရုံးတက်ရုံးဆင်းချိန်တွေမှာ ကားတွေပိတ်ဆို့နေတာကို ကိုယ့်အတွက်ဒုက္ခတစ်ခုလို ရှုမြင်သုံးသပ်နေရင် စိတ်ညစ်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို သီချင်းနားထောင်ဖို့အချိန်ရတာပေါ့လို့ ခံယူလိုက်ရင်တော့ စိတ်ဖိစီးစရာကိစ္စမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အလားတူပဲ ကိုယ်က ဘောလုံးဝါသနာရှင်တစ်ယောက်ဆိုရင် နာမည်ကျော် ဘောလုံးအသင်းကြီးတွေ တစ်ခါတစ်လေမှာရှုံးနိမ့်တတ်တာဟာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့သဘာဝပါပဲဆိုတာကို သုံးသပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကို ကိုယ်အားပေးတဲ့အသင်းရှုံးနိမ့်သွားလို့ဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ကျရှုံးမှုလို ခံစားနေတာဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိရုံသာမက၊ မလိုအပ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အခြေအနေကို ဆိုးကျိုးဖြစ်စေပါတယ်။
၈။ ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်၊ ပညာဗဟုသုတတွေ ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ပြောင်းလဲလာလေ့ရှိတာကို သတိပြုမိမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ စွဲမြဲနေတဲ့ အချို့ယုံကြည်မှုတွေက လက်ရှိအနေအထားနဲ့ မကိုက်ညီတော့ဘူးဆိုရင် အဲဒါတွေကြောင့် မလိုအပ်ဘဲ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ” အလုပ်တစ်ခုရဲ့ အကောင်းဆုံးရလဒ်ကို လိုချင်ရင် ကိုယ်တိုင်လုပ်မှ ရမှာပေါ့” ဆိုတာမျိုးက လူအများ မှားယွင်းစွာ ယုံကြည်နေတတ်တဲ့ဟာမျိုးပါ။ တကယ်လုပ်နိုင်မယ့်သူ (သို့) လေ့လာပြီး ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ချင်သူတွေကို လုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရလာနိုင်သလို၊ ကိုယ်တိုင်လည်း အနားယူဖို့ အချိန်ရလာနိုင်ပါတယ်။
၉။ ခံစားနေရတာတွေကို ဖွင့်ထုတ်၊ မျှဝေလိုက်ပါ။
စိတ်ဆရာဝန်တွေဟာ “ဆရာ့ကို ပြောပြလိုက်ရလို့ ခံစားနေရတာတွေ တဝက်သက်သာသွားပြီ” ဆိုတဲ့စကားကို မကြာခဏကြားရလေ့ရှိပါတယ်။ လူသဘာဝအရ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်၊ ထင်မြင်ချက်တွေကို အခြားသူတွေကို မျှဝေချင်ကြပြီးတော့ ထောက်ခံအတည်ပြုခံရတာကို လိုချင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုရှိလာပြီလို့ ယူဆရင် ကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်ရသူတွေ၊ ယုံကြည်ရသူတွေကို မျှဝေပြောကြားလိုက်ပါ။ အဲဒီအစား အချို့ကတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ စာရွက်လွတ်ပေါ်မှာ ချရေးလိုက်တဲ့နည်းကို သုံးကြပါတယ်။
၁၀။ ဟာသတွေကို ခံစားကြည့်ပါ။
“ရယ်မောခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးဆေးတစ်ခွက်” ဆိုတဲ့စကားကို ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ ရယ်မောလိုက်တာကြောင့် မျက်နှာပြင်ပေါ်က တင်းကျပ်နေတဲ့ကြွက်သားတွေ ပြေလျော့သွားပြီး၊ စိတ်ဖိစီး တင်းကျပ်နေတာတွေကိုလည်း အမြန်ဆုံးသက်သာသွားနိုင်ပါတယ်။ အားရပါးရရယ်မောမှု တစ်ကြိမ်ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကြွက်သားတွေအပေါ် ၄၅ မိနစ်ကြာအောင် သက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ ဆေးပညာရှင်တွေက ဆိုကြပါတယ်။ ရယ်မောလိုက်ခြင်းက ဦးနှောက်က ထုတ်ပေးတဲ့ Endorphins ဓာတ်တွေကို လှုံ့ဆော်ပေးတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေအားလုံးကို သက်သာစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ခေတ်အချိန်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လုံးဝမဖြစ်ပေါ်အောင် တားမြစ်ဖို့ မလွယ်ကူပေမယ့် မလိုလားအပ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့တော့ ကိုယ့်ရဲ့ အမူအကျင့်တွေ၊ တွေးခေါ်စဉ်းစားပုံ၊ လူနေမှုဘဝပုံစံတွေ၊ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေတို့ကို ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်နေ့တွေမှာလည်း တခြားသော စိတ်ဝင်စားစရာ၊ ဗဟုသုတရစရာတွေကို တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။
အောင်မြင်လိုသူတိုင်း သိရှိထားသင့်တဲ့ Golden Cycle
” What” ဆိုတာကတော့ ကိုယ် ဘာလုပ်နေလဲ / ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း က ဘာလုပ်နေလဲ ကို သိရှိဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
“How” ကတော့ ဘယ်လိုလုပ်နေသလဲ / ဘယ်လို ဆက်လုပ်မလဲ ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းသိရှိဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
” Why” က ဒီအလုပ်ကို ဘာကြောင့် လုပ်နေသလဲ / ဘာကြောင့် လုပ်သင့်သလဲ ဆိုတာ သိရှိဖို့ လိုအပ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။
လူတော်တော်များများက အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အပြင်ကနေ အတွင်းထိ What >> How >> Why ဆိုပြီး အစဉ်လိုက်အတိုင်း လုပ်ကြပါတယ်။ ဒါကတော့ သာမန်လုပ်ရိုး လုပ်စဉ်ပါပဲ – ကိုယ် ဘာလုပ်နေလဲ – ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ – ဘာကြောင့် လုပ်သင့်သလဲ ဆိုတာ သိရင် အလုပ်ဖြစ်နေပြီလို့ ထင်ကြပါတယ်။
Comfort Zone ထဲကနေ ထွက်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရယူလိုက်ပါ။
တစ်ခါက ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။ ဒီဘုရင်ကြီးက ငှက်တွေကို အလွန်နှစ်သက်တယ်တဲ့။ တစ်နေ့တော့ သိမ်းငှက်နှစ်ကောင်လက်ဆောင်ရပါတယ်။ ဒီသိမ်းငှက်ကြီးတွေဟာဆိုရင် မြင်ဖူးသမျှထဲမှာ အချောမောဆုံး၊ အလှပဆုံး အမဲလိုက်သိမ်းငှက်ကြီးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘုရင်ကြီးက ဒီသိမ်းငှက်ကြီးတွေကို အရမ်းသဘောကျနေတယ်တဲ့။ သူတို့တွေကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့ နန်းတွင်းက လေ့ကျင့်ရေးဆရာဆီကို ပို့ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း လတွေကြာလာပြီး တစ်နေ့မှာတော့ လေ့ကျင့်ရေးဆရာက သိမ်းငှက်ကြီးတွေအကြောင်း ဘုရင်ကြီးကို အသိပေးခဲ့တယ်။
“ဘုရင်ကြီးဘုရား၊ သိမ်းငှက်ကြီးတစ်ကောင်ကတော့ဖြင့် ကောင်းကင်ယံထက်မှာ လှပကျော့ရှင်းစွာ ပျံသန်းနိုင်နေပါပြီဘုရား။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခြားတစ်ကောင်ကတော့ သူနားနေတဲ့ သစ်ကိုင်းကနေ ယနေ့ချိန်ထိ မပျံသန်းသေးပါဘုရား” လို့ လျောက်တင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘုရင်ကြီးက တိုင်းပြည်မှာ ရှိတဲ့ သိမ်းငှက်လေ့ကျင့်ရေးဆရာတွေကို ဒီသိမ်းငှက်ကြီး ပျံသန်းနိုင်အောင် သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့သူကို ဆုချီးမြှင့်ပေးမယ်လို့ ကြေငြာမောင်းခတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူကမှ မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဘုရင်ကြီးက ကျေးလက်တောတောင်တွေနဲ့ နီးစပ်တဲ့သူတွေကတော့ လုပ်ပေးနိုင်မှာပဲလို့ စဉ်းစားမိပြီး လယ်သမားတွေကို ကြောငြာပြန်တယ်။
နောက်တစ်နေ့ မနက်ခင်းမှာတော့ ဘုရင်ကြီးဟာ နားနေတဲ့ သစ်ကိုင်းကနေ မရွေ့တဲ့ သိမ်းငှက်ကြီး ကောင်းကင်ယံထက်မှာ လှပစွာ ပျံသန်းနေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဘုရင်ကြီးအလွန်အမင်း အံ့အားသင့်သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဘုရင်ကြီးက ဒီငှက်ကြီးကို ပျံသန်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူကို ရှေ့မှောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ဖို့ မှူးမတ်တွေကို အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ မှူးကြီးမတ်ရာတွေက လယ်သမားတစ်ယောက်ကို ခေါ်ဆောင်လာတယ်။ ဘုရင်ကြီးက အလွန်အမင်းသိချင်စိတ်တွေနဲ့ ဒါကို ဘယ်လိုများလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လဲလို့ မေးတော့ လယ်သမားက “ဒါဟာ အလွန်လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။ ကျွန်တော်မျိုးက ဒီသိမ်းငှက်ကြီး နားခိုနေတဲ့ သစ်ကိုင်းကို ဖြတ်တောက်ခဲ့ရုံပါပဲဘုရား” လို့ လျောက်တင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေလည်း ဒီပုံပြင်ထဲက သိမ်းငှက်ကြီးလိုပါပဲ။
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတွေကို ရဖို့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ နားနေတဲ့ သစ်ကိုင်းလေးကို ဖြတ်တောက်လိုက်ရုံပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ မိမိတို့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေကြ ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ နေထိုင်ရတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ တွယ်ဖက်နေထိုင်ကြတယ်။ လုပ်ကိုင်နေကြ အရာတွေ လုပ်ရတာ ကြိုက်တယ်။ ကိုယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေကြ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ ဒီလို ရင်းနှီးပြီးသားလူတွေနဲ့ပဲ ပေါင်းသင်းရတာကြိုက်တယ်။ ဒီလိုပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နေရတာကြိုက်တယ်။ အသစ်အဆန်းတွေ မလုပ်ဘူး။ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေရဖို့ မကြိုးစားဘူး။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေ Comfort Zone မှာနေနေကြတာပါ။
Comfort Zone မှာတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ရင်းနှီးပြီးသားအရာတွေ ရှိနေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ပူပန်စရာနဲ့ စိတ်မချမ်းသာမှုတွေ မရှိတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုပါ။ ဒီနယ်ပယ်မှာရောက်နေရင် ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လုပ်ကိုင်နိုင်မယ်။ မသေချာမှုတွေ နည်းပါးပြီး ယုံကြည်အားထားလို့ရတဲ့ အခြေအနေ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။ Comfort Zone ထဲမှာ နေတဲ့အခါ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်တယ်လို့ ထင်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းက Comfort Zone ထဲမှာ နေတာကြာလေလေ ကျွန်တော်တို့ မပျော်ရွှင်ရလေလေ ဖြစ်မှာပါ။
သက်တောင့်သက်သာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်ဟာ မတိုးတက်ဘူး။ မကြီးထွားဘူးလို့ ပြောတာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွန်းအားမပေးဘူး။ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာမှာပဲ ကျေနပ်နေတယ်။ ဒီအခြေအနေကနေ တိုးတက်ဖို့ အင်အားစိုက်ထုတ်မှုမရှိဘူး။ ဒီလို ဆိုလိုပါတယ်။
ဘာကြောင့် Comfort Zone ထဲက ထွက်ဖို့ လိုအပ်တာလဲ။ ဘဝမှာ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ကြီးပွားတိုးတက်နေတာ ဒါမှမဟုတ်ရင် သေဆုံးနေတာပါပဲ။ ပျော်ရွှင်စရာဘဝရဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်ကတော့ တိုးတက်မှုပါ။ Comfort Zone ထဲမှာပဲ နေရင်တော့ မင်း မရွေ့လျားဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါဆိုရင် မင်းတိုးတက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မတိုးတက်ရင် မင်းအမှန်တကယ် မပျော်ရွှင်ရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေကျအတိုင်း လုပ်ရင် ရနေကျ အရာတွေ ရလဒ်တွေပဲ ရကြမှာပါ။ Comfort Zone ထဲမှာနေထိုင်နေရင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို မရရှိနိုင်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့တွေ ဘဝမှာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နေထိုင်နေကျဖြစ်တဲ့ Comfort Zone ကနေ ဖောက်ထွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘဝရဲ့ တိုးတက်မှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ Comfort Zone ထဲကနေ ဘာကြောင့် ပြေးမထွက်နိုင်ကြတာလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Comfort Zone ထဲမှာ နေနေရင် လုံခြုံမှု ရင်းနှီးမှု သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မှု စတဲ့အရာတွေ ရရှိကြလို့ပါ။ Comfort Zone ကနေ ပြေးမထွက်နိုင်ကြဘူး။ လူတွေဟာ ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အရာတွေကို လုပ်ရတာ နေနေကျ ရင်းနှီးပြီးသား ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေရတာကို လုံခြုံတယ်လို့ စိတ်ခံစားရပါတယ်။ လူ့သဘာဝအရ မသေချာမှုတွေကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ ခုချိန်အဆင်မပြေတာတွေ စိတ်မချမ်းသာမှု မနှစ်မြို့မှုတွေထက်စာရင် Comfort Zone ထဲက ထွက်လိုက်လို့ ရရှိလာမယ့် အဆင်မပြေမှုတွေကို ကြောက်တဲ့ အကြောက်တရားကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ ပြေးမထွက်နိုင်ကြတာပါ။ အသစ်အသစ်တွေ လုပ်ဖို့ စွန့်စားရမှာထက် လုပ်နေကျအရာတွေကို လုပ်ဖို့ကိုပဲ ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်ကြပါတယ်။
Comfort Zone ကနေ ဘယ်လိုထွက်ကြမလဲ။
၁။ သတ္တိ (courage)
Comfort Zone ထဲက ထွက်နိုင်ဖို့ အလွန်လိုအပ်တဲ့ အရာကတော့ courage ဆိုတဲ့ သတ္တိပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိန်ခေါ်မှုတွေ ပြုလုပ်ရဲတဲ့ သတ္တိပါ။ သက်တောင့်သက်သာ နေနေရတဲ့ဘ၀ လုပ်နေကျ ကိုင်နေကျတွေ လုပ်နေရတဲ့ဘဝကနေ အသစ်အဆန်းတွေပြုလုပ်ပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေကို မကြောက်ရွံ့ဘဲ မသေချာမှုတွေကို ပြေးတွေ့ရဲတဲ့ သတ္တိမျိုး မွေးမြူရပါမယ်။
၂။ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကျ အလေ့အကျင့်တွေကို ပြောင်းလဲရပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကျ အလေ့အကျင့်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ဘ၀ အောင်မြင်မှုအတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့အရာထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီအလေ့အကျင့်တွေက ကိုယ့်ရဲ့ Comfort Zone ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အသေအချာပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ မနက်တိုင်း အိပ်ရာထနောက်ကျတတ်သလား။ ဒါဆို ဒီလိုနေ့စဉ် အလေ့အကျင့်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်ရပါမယ်။
၃။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမိန့်ပေးခိုင်းစေတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့် ပျိုးထောင်ရပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ တစ်ခြားသူတွေကို ခိုင်းစေရတာ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခိုင်းစေဖို့ကျပြန်တော့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ပျင်းရိမှုတွေ အကြောက်တရားတွေကို တွန်းလှန်ပြီး ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမိန့်ပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၄။ ကိုယ့်ကို စိန်ခေါ်စေမယ့် ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ချမှတ်ပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
ဥပမာ ကိုယ်ရဲ့ လစဉ် ပုံမှန်ရောင်းအား ထက်ပိုပြီး ရနိုင်ဖို့ ချမှတ်လုပ်ဆောင်တာမျိုးပါ။ ကိုယ်က စာဖတ်တာ ဝါသနာ မပါဘူး။ စာဖတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကို တိုးစေဖို့ တစ်လအတွင်း စာအုပ် ဘယ်နှစ်အုပ်ဖတ်မယ် စသည်ဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိန်ခေါ်စေမယ့် ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ချမှတ်ပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်ရပါမယ်။ အကြောက်တရားကို ပယ်ဖျောက်တဲ့ အလေ့အကျင့် ရစေဖို့ ကိုယ့်ကို စိန်ခေါ်စေမယ့် အရာတွေကို ရွေးချယ်လုပ်ဆောင်ပါ။
ဥပမာ ကိုယ်က လူရှေ့မှာ ထွက်ပြီး စကားပြောရတာကို ကြောက်တာလား။ ဒါဆိုရင် ဒီကြောက်စိတ်ကို တွန်းလှန်ပြီး လေ့ကျင့် လုပ်ဆောင် ကြည့်ရပါမယ်။ ဒီလို စိန်ခေါ်မှုတွေကို လုပ်ရဲလာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့တွေ Comfort Zone ထဲက ထွက်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတွေ တိုးလာပြီး ကိုယ်တကယ် လုပ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့စိတ်က တကယ်လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်လာနိုင်စေပါတယ်။
Comfort Zone ထဲကနေ ထွက်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရယူလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ပျံသန်းနိုင်တဲ့ စွမ်းအားတွေ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ အချိန်အတော်ကြာ ဖက်တွယ်လာတဲ့ အကြောက်တရားဆိုတဲ့ သစ်ကိုင်းကို ခုတ်လိုက်ပြီး လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းလိုက်ကြဖို့ ကြိုးစားလိုက်ကြရအောင်။